Maxkamadda gobolka Saaxil oo xukuntay Magafayaal isugu jira Somali iyo Yemen | Berberanews.com
Home WARARKA Maxkamadda gobolka Saaxil oo xukuntay Magafayaal isugu jira Somali iyo Yemen
Berbera(Berberanews)-Maxkamada gobolka Saaxil ayaa xukuno kala duwan ku riday rag kamida koox isku-dayday inay xeebaha gobolka Saaxil ka tahriibinayaan dhallinyaro ay ka keeneen magaalada Burco ee gobolka Togdheer.
Garsoore Axmed Yuusuf Cabdi oo ka tirsan xukaamta maxkamadda gobolka Saaxil, ayaa ku dhawaaqay xukunka nimankaas, waxaanu sheegay in laba ka mid ahi u dhasheen waddanka Yeman oo watay laash yar oo ay sifo sharci darro ah ugu tahriibinayeen 7 dhallinyaro ah oo aad u yaryar.
Laba Mukhalas oo dhallinyarada tahriibinayey oo magacyadoodu kala yihiin Cabdi Cali Kaahin iyo Ismaaciil Jaamac, waxay maxkamadu ku xukuntay min hal sanno iyo lix bilood oo xadhig ah.
Siduu ku soo waramay weriye ka tirsan wakaaladda wararka Somaliland, waxa labadii nin ee laashka watay oo magacyadoodu kala yihiin Maxamed Saalax Cali iyo Naasir Jaabir Saalim oo Yemaniyiin ah lagu xukumay min afar sannadood oo xadhig ah.
Waxa kaloo maxkamaddu xukuntay in lala wareego laashkii ay wateen iyo GPRSkii ay siteen labadaba.
Maxkamadda ayaa sidoo kale xukunno ku riday kooxda Dhalinyarada ah ee la doonayey in la tahriibiyo.
Xukunka Maxkamadda ayaa waxa loo cuskaday qodobka 332aad ee xeerka ciqaabta.
Previous article“Anigu aad baan ugu kalsoonahay in layna ictiraafi doono” Wasiirka Arrimaha Debedda Somaliland
Next articleIran oo ku hanjabtay in ay tayayn doonto Uranium-keeda